Home » Community & Society » မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ
Posted by on Jul 29, 2013 in Community & Society, Drama, Essays.., Gay/Lesbian, My Dear Diary | 20 comments
ပြောရဦးမယ် ယောင်းမရေ။ ကျမဖြင့် တယောက်တည်း အိပ်ရာထဲမှာ လူးလှိမ့်ရင်း ခံစားခဲ့ရတာ များနေပြီမို့ပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို တယောက်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်လိုက်ရင် ပေါ့သွားတယ် ဆိုတာပြောကြပေမယ့် ကျမတို့လို လူမျိုးတွေရဲ့ စကားကို ဘယ်သူတဦးတယောက်က အရေးတယူ နားထောင်ပေးပါ့မလဲလေ။
ပတ်ဝန်းကျင်က နားမထောင်ပေးတာကို ထားလိုက်ပါဦးတော့ အိမ်က မိသားစုဝင်တွေတောင်မှ ကိုယ့်စကားဆို အဖတ်လုပ်ပြီးတော့ အကောင်းမြင်ပေးတာမျိုးတွေမှ မရှိခဲ့တာပဲ။ အဲဒီအတွက် ယောင်းမကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမတို့လို ဂျီမတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံလေးကို မညီးမငြူ နားထောင်ပေး တတ်လွန်းလို့ပါရှင်ရယ်။
ကျမလေ အခုတလော အင်း… အခုတလောဆိုတာထက် ယောင်းမရယ် ရှင်သတိထားမိလားတော့ မသိဘူး။ ကျမနဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင် ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် ပေါင်းဖက်နေတဲ့ ကျမချစ်သူအကြောင်းကို ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်ကပေါ့ရှင်။ သူ ကျမကို ပြောလာတယ်။ သူ့ဘ၀အတွက် မိသားစု တစ်ခုကို တည်ထောင်ပေါင်းဖက်ဖို့ ကောင်မလေးတယောက်ကို ချစ်ကြိုက်မိသွားတယ်တဲ့လေ။
သူက အဲဒီကောင်မလေးကို တကယ်လက်ထပ် ပေါင်းသင်းမှာဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားကို သူက ကျမကို မပြောခင်မှာ ကတိတောင်းတယ်လေ။ သူပြောမယ့် စကားတစ်ခွန်းကြောင့် သူ့ကို မုန်းသွားတာမျိုးတွေ၊ နာကြည်းသွားတာမျိုးတွေ၊ စိတ်ဆိုးတာမျိုးတွေ မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့။ သူ့ခံစားချက်ကို ပြောပြချင်လို့ပါတဲ့လေ။
ယောင်းမရယ်။ ရှင် ကိုယ်ချင်းစာကြည့်စမ်းပါ။ ကိုယ်အသည်းနင့်အောင် ချစ်ရတဲ့သူတယောက်က ဒီလိုစကားမျိုးပြောလာရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာပဲလေ။ သူ အဲဒီလို ပြောလာတဲ့အချိန်မှာ ကျမ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်လို့ ရှင်ထင်လဲ။
ကျမလည်း လူတယောက်၊ ချစ်တတ်တဲ့ ခံစားတတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးနဲ့ လူသားတယောက်ပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ကျမ သိပ်ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ် ယောင်းမ။ ကျမ သိပ်ကို ဟန်ဆောင်တတ်ခဲ့တယ်လေ။ ကျမ သူ့ရှေ့မှာ အရမ်းကို သဘောထားကြီးတဲ့ လူတယောက်လို ဟန်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ကျမ လူးလှိမ့်အောင် ခံစားနေရတာကို ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲရှင်။
ကျမ တစ်ခု စဉ်းစားမိတယ် သိလား။ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကျမတို့ကို မျက်မုန်းကျိုး အမြင်ကတ်ရတဲ့ အချက်တစ်ခုထည်းမှာ ဂျီမတွေ ပွေတာ ရှုပ်တာ ရည်းစားများတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ရှင်။ ရှင်ရော အဲဒီလို ဂျီမတွေ ရှုပ်တာ ပွေတာ ရည်းစားတွေ ထည်လည်းတွဲနေတာတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲဟင် ယောင်းမ။ ကျမ ရိပ်မိပါတယ်ရှင်။ ဂျီမတွေအကြောင်း နားလည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ရှင်တောင်မှ “ဟုတ်မှာပေါ့၊ လွယ်လွယ်ရတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကျင့်တရားကို ထိန်းသိမ်းမှုမရှိပဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေကြတာလေ” ဆိုတာမျိုး ရှင်စဉ်းစားမိတာ မဟုတ်လား။
ရှင် အဲလိုတွေးတာလည်း မမှားပါဘူးရှင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် များသောအားဖြင့် ကျမတို့ တွေ့နေမြင်နေရတဲ့ ကျမတို့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက ဂျီမတော်တော်များများကလည်း ဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။
အမှန်တော့ ယောင်းမရယ်။ ဒါတွေကလည်း ပညာရေး၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုတွေနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်တာပေါ့ရှင်။ အတန်းပညာလေးတောင် ပြီးဆုံးအောင် မသင်ခဲ့ရပဲ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကနေ လမ်းပေါ်မှာ လွင့်ခဲ့ရတဲ့ ကျမတို့လို့ ဂျီမတွေ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေတာ ဂျီမတွေမှာပဲ အပြစ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ရှင်လည်း မြင်ဖူးမှာပါ။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသွားရင် ကိုယ်ဝတ်ချင်တဲ့ မိန်းကလေး အ၀တ်အစားလေးဝတ်ပြီးသွားကြည့်။ ကျောင်းမရောက်ခင်ကတည်းက သံစုံတီးဝိုင်းနဲ့ သြဘာပေးတာလေးကို ခံရပြီးသားပဲ။ အခုထိတောင် မှတ်မိနေပါသေးတယ် ယောင်းမရယ်။ ကျမဖြင့် ကျောင်းသွားပြီဆို နောက်ကနေ “ ဂန်ဒူး မိန်းမလျာ၊ သုံးဘီးကားနဲ့လာ၊ သုံးဘီးကား ဂီယာထိုး ဂံဒူးအချောင်းကျိုး” ဆိုတာမျိုးတွေကို သံပြိုင်ရွတ်နေကြတာလေ။ အဲလိုမျိုး အချိန်မှာဆိုရင်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းတောင် မသိလောက်အောင်ပဲ ရှက်ရတာပေါ့ရှင်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့လေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မိန်းကလေးတယောက်လိုပဲ ထင်နေမိတယ်။ မိန်းကလေး အ၀တ်အစားတွေဝတ်၊ သနပ်ခါးလေးကို ဖွေးအောင်လိမ်းပြီးတော့လေ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ နေချင်တာရှင်။ အခုရော ဘာထူးလဲလို့ ရှင်မေးချင်နေတာ မဟုတ်လား။ စကားမဖြတ်နဲ့ဦး ယောင်းမ။ ကျမ ဆက်ပြောမယ်။
ကိုယ်က မိန်းကလေးတယောက်လိုပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်တော့ မိသားစုတွေ ဘယ်လောက်တားတား တားတဲ့ကြားကကိုပဲ မိန်းကလေးတယောက်လို ၀တ်စားနေတယ်လေ။ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကတော့ ပြောတာပေါ့ရှင်။ နင့်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရှက်ရတဲ့အကြောင်း၊ မျက်နှာမပြရဲတဲ့ အကြောင်း။ နောက်ဆုံး သူတို့က ကျမကို ပုံစံပြောင်းပေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ ထိုးတာကြိတ်တာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်တွေပါ လုပ်ကြတာ ယောင်းမ။
ထားလိုက်ပါတော့ရှင်။ ပြောရရင် အရှည်ကြီးပဲ။ ပြောလို့တောင် ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှင်သုပ်တဲ့ လက်ဖက်က ကျမ စားဖူးတဲ့ လက်ဖက်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးပဲ ယောင်းမ။ လုပ်ပါဦး။ ရေနွေးပန်ကန်လေးလည်း ထိုးပေးပါဦး ကျမကို။ ရှင်လည်းစားလေ။
ဟင်… ပြောရင်းနဲ့ စကားတောင် ပြတ်သွားပြီ။ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ ကျမပြောနေတာ။ အော်… ဟုတ်ပြီ ကျေးဇူးယောင်းမ။ ရှင်ကလေ သိပ်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယောင်းမပါတော်။ ကျမပြောနေတာတွေကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ပေးတတ်လွန်းလို့။
ကျောင်းမှာကိစ္စကိုပဲ ဆက်ပြောရဦးမယ်။ ကျောင်းမှာလေ အခြောက်မဆိုရင် ထိုင်ခုံနေရာကအစ ဒုက္ခရောက်တယ်ရှင့်။ ကိုယ်က မိန်းကလေး အ၀တ်အစားတွေနဲ့ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတန်းထဲမှာ ဘယ်ထိုင်ချင်ပါ့မလဲရှင်။ ဒီတော့ မိန်းကလေးတန်းမှာပဲ ၀င်ထိုင်တာပေါ့။
အောင်မယ်လေးရှင်။ အဲဒီ မိန်းမဆိုတဲ့ စပိမတွေကလည်း မပြောချင်ပါဘူး။ တကတဲ ကိုယ်လာထိုင်တာကိုများ သူတို့တွေကိုပဲ ကိုက်စားမယ့်အတိုင်းပဲရှင် ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ။ ယောက်ျားတွေဖက်မှာတော့ ထိုင်ဖို့တောင် ကိုယ်က စိတ်ကူးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ။
အလယ်တန်းလောက် ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် အဲဒီထိုင်ခုံပြဿနာက ရှင်မကြုံဖူးဘူးဆိုရင်တော့ ကိစ္စသေးသေးလို့လို့ ထင်ကောင်းထင်မယ် ယောင်းမ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့အတွက်တော့ အဲဒါ ပြဿနာကြီးပဲ။ ထိုင်ခုံမရှိပဲ ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုလုပ် စာသင်မလဲယောင်းမ။ နောက်ဆုံးတော့လေ ကျမ ဘယ်နေရာမှာ ထိုင်ရလဲသိလား။ ယောက်ျားလေးလည်း မလိုချင် မိန်းကလေးတွေလည်း မလိုချင်တဲ့ ကျမက အတန်းရဲ့ ထောင့်ဆုံးက အမှိုက်ပုံးနားက ခုံမှာ ထိုင်ရတာပါတော်။ ဆရာမကိုယ်တိုင် နောက်ဆုံး နေရာချထားပေးလိုက်တာလေ။
ဒီအကြောင်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားမိရင် ကျမ ဘယ်သူ့ကို မုန်းတီးလို့ မုန်းတီးမိမှန်း မသိပါဘူး ယောင်းမရယ်။ နာကြည်းမိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ကျမအတွက် ကျောင်းပညာရေးဟာ မအပ်စပ်ဘူးလို့ ထင်လာတဲ့ မကြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမ ကျောင်းကနေထွက်ခဲ့တယ်လေ ယောင်းမ။ ကျမ ကျောင်းကထွက်တဲ့အချိန်ဟာ တွေးခေါ်မှုဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိတဲ့အရွယ်ပေါ့ရှင်။
ကျောင်းထွက်တော့ အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်လေ။ အိမ်က လုပ်ငန်းတွေကလည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မိသားစုဝင်တွေက ကျောင်းမနေချင်ဘူးဆိုရင် လယ်ထွန်ရမယ်တဲ့လေ။ ကောက်စိုက်တာကိုတော့ လုပ်ချင်ပါတယ် ယောင်းမရယ်။ ဒါပေမယ့် ထွန်တုံးကြီးကို မောင်းပြီးတော့ ဟဲ့ နွား ဟဲ့ နွား ဆိုပြီးတော့ မာန်ဖိပြီး ယောက်ျားတယောက်လို လုပ်ခိုင်းတာကိုတော့ မခံနိုင်ပေါင်ရှင်။ ဒီတော့ နောက်ဆုံး ဂျီမ လမ်းပေါ်ရောက်ပေါ့။
ကဲ… ရှင် စဉ်းစားကြည့်။ ကျမ လမ်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျမ ဘာလုပ်တော့မယ်လို့ ရှင်ထင်လဲ။ ဂျီမ တယောက်အတွက် နဂိုကတည်းက ၀မ်းတွင်းတက်လို ပါလာပြီးသား မိတ်ကပ် ဆံပင်ညှပ် ဖက်ကို ရောက်ပြီပေါ့။ အောင်မယ်လေး အဲဒီမှာတင် ကျမ၊ ကျမလိုပဲ အပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ဘ၀မှာ လွတ်လပ်တော့တယ်တော်။
အပြင်ထွက်ရင်လဲ ဂျီမတသိုက် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ တွေ့တဲ့ယောက်ျားတိုင်းကို ငမ်းတော့တာပေါ့ရှင်။ တွေ့တဲ့ယောက်ျားတိုင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့လည်း ၀န်မလေးတော့ဘူးလေ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လူတွေ မလိုမုန်းထား မုန်းတီးနေတဲ့ ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီး ခံယူလိုက်ပြီတဲ့ ဂျီမတယောက်ရဲ့ ဘ၀အတွက်က နောက်ဖြစ်လာမယ့် အမှုတွေလောက်ကတော့ ဘာမှုစရာလိုတော့လို့လဲ ယောင်းမရယ်။
ကျမအတွက် မိတ်ကပ် ဆံပင် ပညာမှာတော့ တက်ကျွမ်းလာသလောက် ကိုယ်အမူအယာပိုင်းမှာတော့ လူအမြင်ကတ်စရာ ကောင်းနေမှန်းကို သတိမထားမိတော့ဘူးလေ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာပဲ ကိုယ်သိတယ်။ သူတပါးတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်လဲ ဘယ်လိုပြုမူလဲဆိုတာတွေ မသိတော့ဘူး။ စိတ်လည်း မ၀င်စားတော့ဘူး။ လူမြင်ကွင်းတို့လို လူစည်းကားတဲ့နေရာတွေမျိုးမှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ကိုယ်ဂျီမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို လူတွေ ယောက်ျားတွေ သတိထားမိလာအောင် လုပ်မယ်။ ယောက်ျားတွေ စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဆွဲဆောင်မယ်။
ယောက်ျားတယောက်က ဂျီမတွေရဲ့ အလယ်မှာ ကိုယ့်ကို လာချည်းကပ်ပြီ ကိုယ့်နောက်ပါလာပြီဆိုရင် ဒါ ကျမရဲ့ အောင်မြင်မှု သရဖူဆောင်းတာပဲပေါ့ရှင်။ အဲလိုအချိန်တွေမှာ ကျမအနေနဲ့ ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူနေမယ်ထင်လဲ။ ရှင် စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
ကဲ… ယောင်းမ။ ကျမ ပြောနေတဲ့ စကားတွေက တောင်ရောက် မြောက်ရောက်နဲ့ ဦးတည်ချက် မရှိတော့ဘူး။ ရှင်ကလည်း ကျမကို မပြောဘူးဆိုတော့ ကျမလည်း ပြောချင်ဇော်ကကြီးတာနဲ့ လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး။ ကျမ အခုပြောချင်တာက ကျမကိုလေ လူအုပ်ကြားထဲမှာ ဘာဖြစ်လို့ ဂျီမတွေက တလင်တမယား စနစ်ကို မကျင့်သုံးချင်တာလဲ ဆိုပြီးတော့ ၀ုန်းခံလိုက်ရတာနဲ့ ကျမ ချစ်တဲ့သူတယောက်က တခြားကောင်မလေးကို ချစ်တယ်လို့ ပြောလာတာကို ကျမ မချိအောင် ခံစားရလွန်းလို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာပါရှင်။
အမှန်တော့ ယောင်းမရယ်။ ကျမတို့လည်း သိပ်ပြီးတော့ကိုမှ တလင်တမယား စနစ်ဆိုတာကြီးကို ကျင့်သုံးချင်တာပါရှင်။ ယောက်ျားတယောက်ကိုလေ ကျမတို့က ချစ်မိပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာရှိတာတွေ ကုန်ချင်ကုန်သွားပါစေ အကုန်ပုံအောပြီးကို ချစ်တတ်ကြတာပါရှင်။ အဲဒီအချစ်တွေထဲမှာလည်းလေ ယောက်ျားဆီက ဘာပြန်ရပါစေဆိုပြီးတော့ မျှော်မှန်းခဲ့တာမျိုးလည်း ကျမမှာ မရှိပါဘူး ယောင်းမရယ်။ အချစ်တစ်ခုတည်း။ ကိုယ့်ကို မယားမှတ်မှတ် ချစ်သူမှတ်မှတ်နဲ့ ပေါင်းဖက်တာလေး တစ်ခုတည်းကိုပဲ လိုချင်ခဲ့တာပါ။
ပြီးတော့လေ ဂျီမတယောက်အဖို့ ယောက်ျားတယောက်နဲ့ ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ အတူပေါင်းသင်း နေတယ်ပဲထား။ ရှင် ကြည့်လေ။ ဒီတယောက်မတိုင်ခင် အရင်ကကျမနဲ့ ၆နှစ်လောက် အတူပေါင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျားတောင်မှ ဘယ်လို ထားခဲ့လဲဆိုတာ။ ကျမထက်သာတဲ့သူကို တွေ့တာနဲ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြတဲ့ ဟာတွေလေ။ ကျမ ဆင်မြန်းထားခဲ့တာတွေကိုလည်း အကုန်လုံး ယူသွားခဲ့သေးတယ်လေ။ ကဲ… အဲလိုမျိုး အခြေအနေတွေမှာ ကျမတို့အနေနဲ့က ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ကျမတို့ မကျေနပ်လို့ဆိုပြီးတော့ ဘယ်သူ့ကို သွားတိုင်ရမှာလဲ။ ဘယ်သူကရော ကျမတို့အတွက် အမှုအမှန်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးမှာလဲ။ ရှင် ကြည့်စမ်းပါ ယောင်းမ။
အမှတ်မရှိတဲ့ ဒီ အသည်းနှလုံးက နောက်ထပ်တခါ အချစ်ဆိုတာ ပြန်ပေါ်လာပြန်တော့လည်း မထူးပြန်ပါဘူး ယောင်းမရယ်။ ကျမတို့ရဲ့ အချစ်ကံဇာတက မျက်နှာသာ မပေးတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ အခုလည်း ကျမ ချစ်မိရတဲ့ ချစ်သူတယောက်က သူ့မှာ မိသားစုဘ၀ ထူထောင်ဖို့အတွက် ချစ်ရတဲ့သူတယောက် ရှိလာပြီလို့ ပြောလာတော့ ကျမအနေနဲ့ ယောက်ျားကိုပဲ အပြစ်တင်မလား၊ သူချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ သွားပြီးတော့ပဲ ရန်ဖြစ်ရမလား။ ကျမကိုကျမပဲ မုန်းတီးရမလား။ ကျမ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့လောက်အောင်ပါပဲရှင်။
သူက ပြောသေးတယ်လေ။ ကျမက သူ့ကို ကလေးမမွေးပေးနိုင်လို့ပါတဲ့။ အဲဒီစကားလုံးက ကျမအတွက် ၀မ်းအနည်းဆုံးသော ကျမခံစားရဆုံး စကားလုံးပါပဲ ယောင်းမရယ်။ အမှန်တကယ်လည်း ကျမက သူ့ရင်သွေးဆိုတာကို ၀မ်းနဲ့လွယ်ပြီးမှ မမွေးပေးနိုင်ခဲ့တာပဲ။
ဒါဆို ကျမက အသုံးချခံသက်သက်ပေါ့ အဲလိုလား ယောင်းမ။ ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပဲ ယောက်ျားတွေ ထားထားသွားတဲ့ ကျမက အချစ်သစ်တွေ တဖန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ ရှာရတာ ကျမ မျက်နှာများလို့လား။ ကျမရှုပ်ပွေချင်လို့လား။
နောက်ဆုံးတော့လည်း မည်သို့မင်ဆိုစေကာမူ ယောင်းမရယ်၊ ဥပဒေရဲ့ အကာကွယ်ပေးခံရတဲ့ အပိုင်းမှာလည်းမရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း လက်ခံဖို့မလွယ်ကူနိုင်၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး အရာရာမှာ အားနည်းခဲ့ရတဲ့ ကျမတို့ ဂျီမဘ၀တွေကို စားနာပေးတတ်ပြီး ကျမတို့ရဲ့ ရင်ထဲက အသံလေးတွေကို နားထောင်ပေးတတ်တဲ့ ရှင်တို့တွေကိုပဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ကျမတို့မှာလည်း ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးရှိတယ်။ အရှက်တရားတွေ အကြောက်တရားတွေ ရှိတယ်။ အထီးကျန်မှု ၀မ်းနည်းအားငယ်မှုတွေ ရှိတယ်။ တခါတလေမှာ အင်အားဆုတ်ယုတ်လာတာတွေ ရှိတယ်။ လူတွေပေးတဲ့ မေတ္တာတရားကို ငတ်မွတ်တတ်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက မရရှိခဲ့တဲ့ မိသားစုရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ နားလည်လက်ခံပေးတတ်မှုတွေ မေတ္တာတရားတွေကို အမြဲတမ်း ငတ်မွတ်ခဲ့တာပါ ယောင်းမရယ်။
ကဲ ကဲ… ပြောနေရင် ပြောစရာတွေက ကုန်မှာကို မဟုတ်ဘူး။ တဘ၀လုံးစာ တသက်လုံးစာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက များမှများပဲ။ ရှင်လည်း လုပ်စရာရှိတာလုပ်ဦး။ ကျမလည်း ပြန်လိုက်ဦးမယ်။ ရှင့်မှာလည်းနော်… နားလည်းထောင်ပေးရသေးတယ်။ လက်ဖက်သုပ်၊ သရက်သီးအချဉ်သုပ်လေးနဲ့လည်း ဧည့်ခံရသေးတယ်။ အားလည်းနားတယ်၊ ချစ်လည်းချစ်တယ် ယောင်းမရေ။ ကျမ သွားပြီနော်။
နားထောင် သွားတယ် ဖြိုး ရေ။
အဲဒီ ယောင်းမ လိုတော့ ကျွေးစရာ လက်ဖက် မရှိဘူး။
အရီး ထင်တာပြောရရင် ပုံမှန်စိတ်ရှိတဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက် ကတော့ မိန်းကလေးစိတ်ပေါက်နေသူ တွေ ကို ဘယ်လိုမှ နားလည်ပေးမှာ မဟုတ်တာဘဲ။
ဖြိုးတို့လို သူတွေ ဆီကို ချည်းကပ်လာတာ ဟာ စိတ်ရင်းမှန်ထက် အဓိက စားရချောင် လို့ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီလို ပြောတာ ဝါးလုံးရှည် နဲ့ ရမ်းတီး မိတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ရာနှုန်း အတော်များများ မှန်မှာပါ။
ဖြိုးက လက်တွေ့ဘဝ မှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်၊ ကိုယ့်ကို ကျောရုံ ကစား နေသူတွေ အကြောင်းကို သိနေတယ်။ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းကို သိနေတယ်။
ဒီလို အသိဝင် နေတာ အများကြီးကောင်း ပါတယ်။
ဖြိုးစိတ် ကို ပြင်ပါ လို့ မပြောလိုပါဘူး။
လောလောဆယ်မှာတော့ စိတ်ကို ချက်ခြင်းပြင် လို့ ရချင်မှ ရမယ်။
စိတ်ကို ပြင်လို့ မရပေမဲ့ စိတ်ကို အစွန်း ထွက် မသွား အောင် ထိန်း လို့ ရကောင်းပါရဲ့။
ဘာသာရေး နဲ့ ပြောရင် အတိတ်အကျိုး ကြောင့် ဒီဘဝ မှာ ဒီလို အကြောင်းရနေတော့ ဘယ်လို ရုန်းထွက်နိုင်မလဲ နည်းရှိရ မှာပါ။
အခု တော့ ပြောချင်တာ တွေ အားလုံးရွာထဲ မှာ ရင်ဖွင့် ကြည့်ပေါ့။
အရီး တို့တွေ နားထောင် ပါတယ်။
ရွာ့ကာလသား တွေ ကိုတော့ ဘေးဖယ်ထားလိုက်ဦး။
သူတို့ ကတော့ ဖနောင့် နဲ့ ပေါက်ချင်မဲ့သူ တွေချည်းနေမှာ။
ဖြိုး က သူတို့ လိုဘဲ မို့ သူတို့ မှာ ကိုယ်ချင်းစာဖို့ ခက်မယ်။
အရီး တို့ ကသာ မိန်းမ ပုံစံ ဖြစ်နေသူ မို့ ကိုယ်ချင်းစာကြည့် နိုင်တာပါ။
ဒါကလဲ သူတို့ ကို အပြစ်ပြောလို့ မရနိုင်ဘူး ဖြိုး ရေ။
ရွာ့ ကိုယ်တော် တို့ ကလဲ သူ စိတ်ထဲ ရင်ဖွင့်ချင်တာလေး တွေ ကို သည်းခံလိုက်ပါ။
ဒီကောင် ကျား ဘဲ လို့ မတွေး ဘဲ စိတ်ထဲ မှာ သိမ်ငယ်မှု တစ်ပိုင်း လူသား တစ်ယောက် လို့ တွေးပါ။
သူ့ကို ဘယ်လို ဝိုင်းကူညီနိုင်မယ် စဉ်းစားပါ။
ရွာထဲ ဝင်လာပြီး ရင်ဖွင့်ချင်သူ တွေ ကို စာနာစိတ်လေး နဲ့ လက်ကမ်းပေးဖို့ပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေက နေယူတတ်ရင် ဘဝနေနည်း အကျင့်တစ်ခု ရလာနိုင်ပါတယ်။
ရွာ နာမည်ပျက်အောင် မလုပ်သ၍
သူ့ရဲ့ ခံစားချက် တွေ ကို ရေးနေနိုင်ပါတယ် မဟုတ်လား။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ဆိုလို့ စောကြည်ဖြူ့ယောက္ခမ ဒိုင်တွေ ထွက်ကျတော့မလားမှတ်တယ်..
ဟုတ်လည်းဟုတ်ဖူး … အန်းနီးဝေး
တနေ့ သေကြရမည် မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ်ကြ။
မိန်းမက ယောက်ျားစိတ်ရှိတဲ့ ယောက်ျားလျှာ
ယောက်ျားက မိန်းမစိတ်ရှိတဲ့ မိန်းမလျှာ ဆိုတာ ဘာမှမဆန်းပါဘူး…
လူတိုင်းရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရမ်းများပါတယ်။
အောက်ပြည်ထက် အထက်အညာမှာ ပိုများပါတယ်။
သူတို့အများစုက ဒီလိုပဲ အခြားလူတွေကြားမှာ ပုံမှန် ဆက်ဆံနေထိုင်လုပ်ကိုင်ပေါင်းသင်းနေကြပါတယ်။
အဲသလို ပုံမှန် (ပုံမှန်) ဆက်ဆံနေထိုင်လုပ်ကိုင်ပေါင်းသင်းနေသရွေ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဘယ်သူမှ အပြစ်မဆိုပါဘူး၊ မလေးမခန့်မလုပ်ပါဘူး၊ မစော်ကားပါဘူး၊ အနိုင်မကျင့်ပါဘူး…။
ဒါကြောင့် ဘယ်ယောက်ျားကမှ သူ့ကို မိန်းမလိုတော့ မချစ်ပါဘူး…။
အလွန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရင် သနား ခင်မင် တယ် ဆိုတာလောက်ပါ။
အခု မိန်းမလျှာတွေကို ရည်းစားထား၊ တွဲတာ တွေကို လိုက်ကြည့်ရင် အဲဒါ- အခွင့်အရေးလိုချင်လို့ အချောင်နှိုက်ဖို့ကြံကြတာဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်။
အဲဒါအဖြစ်မှန်ပါ။ အမှန်ကိုလက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။
ဘယ်မိန်းမကမှ သူ့ကို ယောက်ျားလိုတော့ မချစ်ပါဘူး….
အလွန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာက အရမ်းခင်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျုပ်ခင်မင်တဲ့၊ လေးစားတဲ့၊ အထင်ကြီးတဲ့၊ အားကျတဲ့၊ ကြည်ညိုတဲ့..
မိန်းမလျှာ ယောက်ကျားလျှာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။
အများစုက ကျုပ်ထက် သာ ကြပါတယ်။
ခဲနဲ့ပေါက်ချင်တဲ့ ယောက်ကျားလျှာ မိန်းမလျှာ နဲနဲကိုလည်း တွေ့ကြုံဖူးပါတယ်။
တသက်တာမှာ လေးခါတိတိ ခဲနဲ့လိုက်ပေါက်ဖူးတယ်…။
ပထမဆုံးပေါက်တာက နယ်က ရထားလမ်းဘေးမှာ…
နောက်ဆုံးပေါက်တာက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် န၀ဒေးဆောင်ဘေးမှာ….
အရာရာတိုင်းမှာ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းရှိကြပါတယ်……
အဲလို လူတွေကို မြင်ရင် ရီချင်လာတာ
သူတို့ ကို လည်း
တန်းတူပဲ သဘောထား ရမယ်လို့ ခံယူပါကြောင်း
“ ယောင်းမကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမတို့လို ဂျီမတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံလေးကို မညီးမငြူ နားထောင်ပေး တတ်လွန်းလို့ပါရှင်ရယ်။”
ဒါဆိုရင် ယောင်းမ=သဂျိုင်ခီး ဖြစ်သွားပြီ
အတည်ပြောရရင်တော့၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနားကားလမ်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ကို လိုလေသေးမရှိ အစစကူညီခဲ့တဲ့
နည်းနည်းတော့ ပြောချင်တယ် ဖြိုး
မနေ့ က စာဖတ်ကတည်းက စဉ်းစားတယ်..
အဲလို ဆိုရင်တော့ အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ခံစားမှုကို အငှားဝင်နှစ်ပြီး ရေးထားတာ ဆိုရင်..
၁။ ရေးရဲတယ်..။ ပူးကပ်ထားသလိုကို ရေးနိုင်တယ်..( ကျနော်ဆို ဒီလို မရေးရဲ ဘူး..)
ကိုယ်တိုင်ခံစားမှုအတွက်ချပြတာ ဆိုရင်တော့..ကော်မန့် ဝင်ရေးချင်တာတောင်.. ယောင်းမ လို့ ထိပ်က တပ်ရေးထားတော့
ကော်မန့် တောင် ၀င်မရေးရဲ ဘူး..။
ကဲ .. ပြောကြမယ်ဖြိုး..။
လောကမှာ ကျား..ရယ် မ ရယ် ၂မျိုး ရှိတယ် လို့ သတ်မှတ်ပေမယ့်.
ကြားထဲမှာ… ယောင်္ကျားလျာ.. မိန်းမလျာ.. ၂မျိုး ပိုလာသေးတယ်..
လျာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးက တော်ရုံ နေရာတွေမှာ တောင် သုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး…
မဖြစ်သေးခင်..သို့ မဟုတ် နောင်ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာမှာ သုံးတတ်တဲ့အတွက်.. အတော် သတိထားကြည့်မှ တွေး နိုင်ပါမယ်..။
ဘာသာရေး အလိုအားဖြင့် အတိတ်ဘ၀ကံ အကျိုးပေးပေါ့..
ဆေးပညာအရ. မဟော်မုန်း အချိုးအစား ပိုများပြီး မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာသော အမျိုးသားကို မိန်းမ လျာ..
ကျား ဟော်မုန်းဓါတ်ပိုမို များပြီး မွေးလာတဲ့ ကလေးကို ယောင်္ကျားလျာ.. လို့သတ်မှတ်ပြီး ပြောနိုင်တယ်..။
ဆေးပညာမှာ တော့ မိခင်ဝမ်း သန္ဓေ တည်စ ကတည်းက ဟော်မုန်း ဖွဲ့ စည်းမှု အချိုးအစားကြောင့်ပါဘဲ..။
ဒါက ထားလိုက်တော့.. အဓိက က ကျား ဖြစ်ဖြစ် မ ဖြစ်ဖြစ် ကာမကို ခုံမင်ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်ပါလာတယ်..
ကာမကို လိုချင်တယ် ..အိမ်ထောင်ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ.. ကာမကို ခံစားတယ်..။
ဒါပေမယ့် ရှိနေတဲ့ စိတ်ကို အသိပညာ..အရှက်တရားနဲ့ ထိန်းချုပ်ကြတယ်..။
ဒါကလည်း အရှက်တရားနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ ပိုထိမ်းသိမ်းကြတယ်..။
ချစ်သူ ။ သို့ မဟုတ် အိမ်ထောင်ဖက်ဆီက ခံစားရယူနိုင်တယ်..
ငွေကြေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ကို ဖြေဖျောက်နိုင်တယ်..။ မိန်းကလေးလဲ ဒီစိတ်ရှိပေမယ့် အရှက် အိဒြေ္တွနဲ့ထိန်းချုပ်ပါတယ်..။
ကြားထဲမှာ ပြသနာကြီးတာက ခုနက လျာ ၂ မျိုး…။
ဒီ၂ လျာမှာ လဲ ဒီစိတ်က ရှိနေတယ်..
လျာ..ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် မိန်းကလေး အစစ်လို အရှက်နဲ့ မထိမ်းဘူး.. ရဲတယ်..
လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေက ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် လူစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်တယ် ဆိုပေမယ့် ဘေးလူအမြင်မျာ လှောင်စရာ ဖြစ်နေတတ်တယ်.. ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်..။
ဒါပေမယ့် မိန်းမလျာ တိုင်းလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး.. တချို့ အသိတွေထဲမှာ ရာထူးကြီးကြီး ပညာတတ် တွေက အစ ဒီစိတ်ဖြစ်နေတာကို အံ့သြလောက်အောင် တွေ့ ဘူးတယ်..
ဒါပေမယ့် လူသိပ်မသိဘူး.. ဘာလို့ လဲဆိုတော့..
အရှက်တရားရယ်.. အသိတရားရယ်က ထိန်းချုပ်ထားနိုင်လို့ …။
ဘေးကကြည့်ပြီး .. နားလည် ပေးနိုင်လို့ကော်မန့် ဝင်ရေးနိုင်ပေမယ်..
ကိုယ့်အရှက် တရား ကိုယ့်သိက္ခာ ကို ဖြိုး တို့ က ကိုယ့်ဘာသာ ထိမ်း၇မယ်..။
ကိုယ်က အစစ်မဟုတ်ပေမယ့်..တန်ဘိုး ရှိချင်ရင်.. တန်ဘိုးရှိအောင် နေရမယ်.. ဒါပေမယ့် အစစ်တော့ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး…။
စိတ်ခံစားမှု ဖြစ်လာ၇င် ထိမ်းချုပ်ရမယ်..
ဖြစ်နေတာက အချစ်ငတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ဘဲ… အချစ်စိတ်ဖြစ်နေတာကို ကာမစိတ်နဲ့ သွားအစားထိုးနေတော့..
ကောင်းမလာဘူး..ရောဂါတွေ ဖြစ်မယ်..ပါတ်ဝန်းကျင်ကနေ ခါထုတ်ခံ၇မယ်..။
အကြံပေးချင်တာက အချစ်ငတ်နေတဲ့ စိတ်ကို.. အစားထိုးပါ..
ဥပမာ.. ကောင်လေးတွေ ချူတာကို ယုံပြီး ကုန်မယ့်အစား..
အချစ်မေတ္တာ ငတ်နေတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေကို ကူညီပါ.. ကျွေးမွေးပါ..
မိဘမဲ့ကျောင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သွား လုပ်အားပေးပါ။။လှုပါ .. အချစ်တွေပေးပါ..။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လျာတွေကို ခွဲခြားကြည့်တတ်ပေမယ့်လို့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ကြင်နာမှုနဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေကိုကူညီတဲ့
လျာတယောက် ဂျီမ တယောက်ကို မောင်းထုတ်လောက်အောင် မရိုင်းပါဘူး…။
tv အစီအစဉ် တခုမှာ ထိုင်းက ဖြတ်ဖောက်ချုပ်တယောက်ကို အင်တာဗျူးတော့ သူပြောတယ်.. ဘယ်လောက်ဘဲ တူအောင် လုပ်ထားပေမယ်.. အစစ်မဟုတ်တော့ ပစ်သွားတာပါဘဲတဲ့.. ခုဆို လက်ထပ်ထားတာ..၃ ယောက်မြောက်..သူလည်းတနေ့ ပစ်သွားမှာ သိပါတယ်တဲ့..။
ကဲ.. တော်လောက်ပြီ ဖြိုးရေ..
ဦးရဲ့ ဆရာ တယောက်လဲ ဒီဘ၀မှာ ဟိုေ၇ာဂါနဲ့လောကထဲကနေ ထွက်သွားရတယ်..
ထိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ပညာတတ်သူငယ်ချင်းလည်း..ဒီနွံတောထဲမှာ ပျော်နေတယ်..
ဖြိုးကို ခင်လို့ ပြောပြတာပါ..ငယ်လည်း ကိုယ်တို့ ထက် ငယ်ဦးမှာပါ..။
လျာ ဖြစ်တာ… အပြစ် မဟုတ်ဘူး..
မကောင်းတဲ့ စိတ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တာက မှ တကယ့် အပြစ်ပါ..။
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက HIV ..AIDS..ဆိုတာတွေ
မကြားဘူးသေးပါ….ဒီအချိန်းမှာ မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကာလသားရောဂါရယင်(ဖာကျိုးယင်)ကုလို့ရတယ်..
အခြောက်တွေနဲ့သွားပါတ်သက်လို့ ရောဂါရယင်(အခြောက် ကျိုး ကျိုးယင်) ကုလို့မရဘူတဲ့…..
ဘာဘဲပြောပြော ဒီရောဂါ စအခြေတည်တာ အခြောက်တွေကနေ စတယ်လို့ထင်မိတယ်ဗျာ…
ဖတ်ဖူးတာပြောရရင် ဒီ ကုမရတဲ့ရောဂါကို အာဖရိက ကနေ စသယ်သူလို့ယူဆရသူက
ရောက်လေရာ ဟိုဟာသရမ်းတဲ့ လေယာဉ်မောင် အခြောက်မ တစ်ယောက်ပါ…
နောက်ဆုံး ဂျီပုန်းမင်းသားကြီး Rock Hudson ဒီရောဂါဖြစ်ပြီလို့ ကမ္ဘာကို ကြေငြာမှ…
ကျောက်စ် ကတော့… အင်း… မပြောတော့ပါဘူး… ဟီဟိ
” ဒီ ကုမရတဲ့ရောဂါကို အာဖရိက ကနေ စသယ်သူလို့ယူဆရသူက
ရောက်လေရာ ဟိုဟာသရမ်းတဲ့ လေယာဉ်မောင် အခြောက်မ တစ်ယောက်ပါ ”
တော်သေးတာပေါ့ ။ သင်္ဘောသား မဟုတ်လို့ ။
ဖင်စအို လေခိုလို့ ဖင်တွန့်လွန်းတဲ့ ငဖြိုးဆိုတဲ့ မိန်းမလိုမိန်းမရ.. ယောက်ျားက ကူလီကူမာ စိတ်တ၀က်
မိန်းမက ပလီပလာစိတ်တ၀က်နဲ့ တောက်ကျင့်တွေ သိပီးသား။ ရေစရာရှားလို့ ဂေးလ်ဆိုဒ်တွေ
ရှိနေတာကို.. တောက်မြင်ကပ်လို့ဆဲတာထက် ရွာကို ဂျန်ဒါ နှစ်ခုပဲရှိစေချင်တယ်..
မင်းတို့ တောက်ကျင့်တွေ ပူးကပ်ပြီး အရောင်ဆိုးမှာစိုးလို့ ဖိုက်နေတာ..။ အရွယ်စုံဖက်နေတဲ့ထဲ အသိဥာဏ်စိတ်နုသေးတဲ့ တက်သစ်စလူငယ်လေးတွေ
ဖတ်နေတာမို့ အတုယူမှားပီ စိတ်ကို ၀င်မပူးသတ်စေချင်ဘူး။ ဖင်ဂေါင်းကျယ်တဲ့ ငဖြိုးရ..။
လူ့စည်း ဘီလူးစည်ဆိုတာ ရှိတယ်ကွစ်…
ဆဲတယ်ကွာ.. ရီးပဲ..။ ဒါမျိုးဆဲရင် ပိုတောင်ကြိုက်ဦးမလားပဲ..
ဒင်း.. အဖက်လုပ် ပြောမနေနဲ့ ကစည်သွပ်… ငဖြိုးရှေ့မှာ ငါးထောင်တန်တရွက် အမှတ်တမဲ့ ပစ်ချလိုက်မယ်… သူကုန်းကောက်တုန်း နောက်ကနေ တအားဝင်စောင့်ပစ်လိုက်… နင်တို့သင်္ဘော ရှေ့က ကန့်လန့်ဘေးတိုက် ပမာမခန့်လုပ် ဖြတ်သွားတဲ့ အခြားသင်္ဘောကို တိုက်ပစ်သလိုပေါ့ကွာ… အေအပြင် ဘီမရှိဗူး… ဆော်သာဆော်…
နယူးယောက်ကာ ဂေးတွေရှေ့မှာကျ… ကိုရင်ကြောင်ကြီး.. အခုလိုအသံထွက်ရဲမယ်လို့တော့.. မထင်ရေးးးးးချ.. မထင်…
ဒီည ၁၂နာရီတိတိကစပြီး… .. မင်နီဆိုးတားနဲ့..ရို့ဒ်အိုင်းလန်း ၂ခု.. လိင်တူလက်ထပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဗျ…
CNN (blog)-1 hour ago
(CNN) — They’ve beenacouple for two years and are eager to raise two children together. But it wasn’t until Thursday that Holli Bartelt and …
Wykoff couple to be one of first same-sex couples to wed in Minn.
At 12 a.m. Thursday, Minnesota and Rhode Island officially became the latest among 13 states — plus the District of Columbia — to allow same-sex marriage. Both states passed applicable laws in May.
အခြောက် ခေါ် မိန်းမစိတ်ပေါက်နေသော ယောက်ျား များကို မြန်မာတို့က ပါဠိ စာပေ အရ နပုန်သက ပဏ္ဍုပ် ဟု ခေါ်သည်။ ယခင် ဘ၀ များက သူတပါးဧ။် သားသမီး သားမယား များကို နှောင့်ယှက် ပြစ်မှားခြင်း ဟူသော ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ကံကို ကျူးလွန် ခဲ့သောကြောင့် ငရဲခံပြီး လူပြန်ဖြစ် သော်လည်း အကုသိုလ် မကုန်သော ကြောင့် ယောက်ျား မဟုတ် မိန်းမ မဟုတ်သော ဘ၀ကို ရောက်သည်ဟု အယူ ရှိကြသည်။ ထိုသူများသည် ယောက်ျား ကဲ့သို့ ကျားကျားလျားလျား သတ္တိ ဗျတ္တိ ရှိသည်မဟုတ်။ အင်္ဂါ ဇာတ်နဲ့ မျိုးဗီဇ ကပင် ပွင့်လင်း မြင့်မြတ် မှု မရှိရာ စိတ်ဓာတ် ပွင့်လင်း မြင့်မြတ်မှု မရှိ သည်သာ များလေသည်။
ဂန်ဒူး= shemale (စကော့ဈေးတွင် ရှောက်သီးဆေးပြား ရောင်းသော အခြောက်များလို ပေါ်တင် မိန်းမလို နေသူ) စသည်ဖြင့် အကြမ်းအားဖြင့် သုံးမျိုး ခွဲခြား နိုင်လေသည်။
သဂျီးပြောသလို.. ဒီလိုဒီလို ဒွေကို နယ်တစ်နယ်စီမှာ တရားဝင်ပေးလိုက်တော့ အင်းးး မြတ်စွာဘုရား ဟောတာတွေ မကြာခင်တော့ မှန်တော့မယ်ပေါ့..။
ရာဂကာမ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖောက်ပြန်ခံစားချင်လို့ လူအခွင့်အရေး မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့
ဥပဒေတွေကို သား သိပ်မုန်းတာပဲ မေမေ…
အခြောက်များအား.. အတင်းကာရောနှိမ်ချပြောဆိုသူများသည်.. အခြောက်စိတ်ပေါက်နေသူ..ပေါက်ခဲ့သူများသာဖြစ်သည်..။
ဒို့လေ.. ဒို့ ဘာမှ မဆိုရက်တော့ပါဘူး ဖြိုးလေးရေ..
အခြောက်များအား.. ဝေဖန်သူများကို အိုးကမပူ စလောင်းကပူ ကက်လန်ရန်တွေ့ တုံ့ပြန်သောသူများသည် အခြောက်ဆိတ်ပေါက်နေသဖြင့် အပြောအဆိုခံနေရသူ၊ ခံခဲ့ရသူ (တုတ်အားဖြင့်သော်၎င်း၊ နှုတ်အားဖြင့်သော်၎င်း) များသာဖြစ်သည်။
ကျမ သူကြီးအမြင်ကိုသဘောတူတယ်။ ကျမတို့ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်။ ရိုင်းပြတာ နှိမ့်ချတာ တွေ မလုပ့်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ ကျမ အခြောက်တွေ ကို လက်ခံသလားဆိုတော့ ၂၀% လောက်ပဲ လက်ခံပါတယ်။ ဒါတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပဲ သူ့ပါတနာနဲ့ သူနေတဲ့သူတွေကိုရယ်ပါ။ အဲ့ထက်ပိုတဲ့ သူတွေရယ် အဲ့အခြောက်တွေကို ညာစားတဲ့ ယောက်ကျားစစ်စစ်ပါဆိုသူတွေကိုတော့ တော်တော်အမြင်ကပ်သား။